ဟေ့အဲဒီမှာ! ဓါန္မွလွိဳက္လွဲစြာၾကိဳသစ်ပင်ညမ်းဂိမ္း:တစ်ဦးမယုံကြည်နိုင်လောက်ပေါ်တယ်မှမြှုပ်နှံပေးခြင်းမှဝင်ရောက်ခွနောက်ဆုံးပေါ်နှင့်အကြီးမားဆုံးအတွက်သစ်ပင်ပုံစံလိင်ဂိမ်း။ ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်စတင္ခဲ့စဥ္ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၈၊ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့စပိုင်းတွင်စတင်ထုတ်လုပ်မှုအပေါ်ကျွန်ုပ်တို့၏သီးသန့်ခေါင်းစဉ်များစတင်မှာ ၂၀၁၆။ ထိုကတည်းက၊ကျနော်တို့အသွားကနေအစွမ်းသတ္တိကိုအခွန်အတူတကွချပြီးအေးကျွန်းစုပစ္စည်းရဲ့ချည်နှောင်ဖို့သင်၏စိတ်ကိုမှုတ်။ စိတ်ချပါငြိမ်ဝပ်စွာနေဆိုရင်သူတစ်ဦးမြင့်တန်ဖိုးကြီးစွာသောဂိမ်းကစားခြင်းပျော်စရာရှိသည်အထူးသဖြင့်ကြည်ညိုလေးစားဘို့အချည်းနှီးသော၊ဤအရပ်သငျသညျလုံးဝထွက်စစ်ဆေးရပါမည်! အဘယ်ကြောင့်၊သင်မေး?, ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တစ်ချို့ကိုလည်းလုပ်ခဲ့ကြပြီးမယုံနိုင်စရာအချိန်ပါပြီနှင့်ကောင်းစွာ၊ရုံကျွန်တော်တို့ရဲ့ညစ်ညမ်းဂိမ်းဝေးရှေ့ဆက်အဆိုပါပြိုင်ပွဲ'။ မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်းသင်တို့ကိုတွေ့မြင်ပါလိမ့်မယ်အထောက်အသင်းမှာ:ဒါဟာမယုံနိုင်စရာတွေရရှိကြောင်းအားလုံး၏ကျွန်တော်တို့ရဲ့လစဉ်ကြေးအတွက်ခက်တဲ့ကိစ္စစက္ကန့်။ ဒါကြောင့်ဘာကြောင့်မပျော်အပေါ်၌ကိုယ်အဘယ်အရာကိုမြင်ကြီးမားပျော့ဖြစ်ပါသည်? ကျနော်တို့မကြာသေးမီကအချို့ကြီးမားတဲ့အပြောင်းအလဲကိုဘယ်လိုဂိမ်းအဖြစ်လိမ့်မယ်လို့တစ်ဦးဘောလုံးကိုကြည့်ဖို့သင်အခြားဘက်ခြမ်းအပေါ်! ျချင်ပါတယ်ဆိုရင်ပိုသိ–ဖတ်ရှုခြင်းကိုဆက်လက်။, ပေးမယ်အ nitty gritty အရာကိုအပေါ်ချည်းညမ်းဂိမ်းကမ်းလှမ်းမှုကိုဖို့ရှိပါတယ်။
ချင်ကြပါဘူးတစ်ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်? စိုးရိမ်ကြောင်းဗိုင်းရပ်စ်ကနေတစ်ညမ်းပုံစံဂိမ္းခရီး? ကောင်းပြီ၊သတင်းကောင်းသည်အတိုင်းသင်ရှိသည်၊သီညမ်းဂိမ်းများနိုင်ပါလိမ့်မည်ပေးသင်နှင့်အတူအချို့သောပူပြင်းခြင်းနှင့်ၡမ်ားဂိမ္းအရေးယူ။ အကြောင်းပြချက်ကရိုးရိုးလေးပါ:သင်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးဒေါင်းလုဒ်လုပ်ဖို့ဘာမှမ! ကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့ခေါင်းစဉ်ဖြင့်ရာက္ဇာဆော့ဖ်ဝဲကိုအဓိပ္ပာယ်၊ဒါကြောင့်နေသမျှကာလပတ်လုံးသင် Chrome၊ေပ၊မြေခွေးသို့မဟုတ်အစွန်း၊သင်မည်မဟုတ်မည်သည့်အရေးကိစ္စများရှိသည်သမျှအတိုင်းခံစားခြင်းအကြောင်းအရာကိုငါတို့သည်အတွင်းအပြင်။, ကိုယ့်ပါကလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်အဖြစ်အတော်လေးမကြာသေးမီထုတ်ဝေ:သင်အများရမယ့်အနေအားဖြင့်နှင့်အတူမီးမြေခွေးဗားရှင်းကြောင်းပြန်လွတ်လာခဲ့သည် ၁၀ လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်! အိုး၊နှင့်ထိပ်ပေါ်မှာငါတို့၏-အခြေခံပြီးဂိမ်းရရှိမှုအဖြစ်လူသိများသောသင်တက်လက်မှတ်ထိုးနိုင်ပြီးလက်မှတ်ထိုးသို့ချည်းညမ်းဂိမ်းတာဝန်ခံလုံးဝအခမဲ့။ မှန်တယ်:ဤတစ် freemium စီမံကိန်းနေရာရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးများအတွက်ပေးဆောင်ဖို့ဘာမှမ! သင်သေးငယ်တဲ့အတွက်နည်းလမ်းများနှင့်အတူစုံတွဲတစ်တွဲ၏စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ဝယ်ယူချင်တယ်ဆိုရင်၊ဒါပေမယ့်မလိုအပ်ခံစားဖို့တစ်ခုလုံးကိုဂျီ၏ခေါင်းစဉ်အကြောင်းရှိသည်။, ကျနော်တို့သက်သေပြချင်တယ်၊သင်သိသောဤစက်မှုလုပ်ငန်းအတွင်းထွက်ကုန်ပစ္စည်းစောင့်ရှောက်ဖို့ပတ်ပတ်လည်သင်နှင့်။ တက်လက်မှတ်ထိုးဘို့အချို့သောကြီးမြတ်လိင်ဂိမ္း:သိကအာရုံစေသည်!
အလွန်အရေးကြီးသလဲဆိုတာကိုဂိမ်းငါတို့သည်သင်တို့အဘို့အလွန်ကြီးစွာသောကြည့်ရှု၊ဒါပေမယ့်မဟုတ္ပါဘူး။ဆိုလိုတာဖြတ်တောက်ခြင်းအစွန်းဂရပ်ဖစ်:အဆိုလိုတာကကျွန်မတို့ဟာမူရင်းမှစစ်မှန်တဲ့ဗေဒ၏အချည်း။ ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ခဲ့ဖူးရာပေါင်းများစွာများအတွက်နာရီနားလည်စေသည်ဘယ်အရာကိုဤအရာနှင့်ယုံကြည်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့တိကျမှန်ကန်မှုကိုအဘို့အခက်ခဲဖြစ်လိမ့်မည်သင်ပြောပြဖို့အပြင်ကနေစစ်အမှန်သဘောတူ။ တကယ်တော့၊လိမ့်မည်ဟုတစ်ခုတည်းသောအရာပေးသွားမယ့်ဘာကိုငါတို့ဥစ်စာနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်မဖွင်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုနေပါပြီစုတ်နှင့်မူရင်းပါဘူး!, ငါတို့သည်လည်းအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရှိသည်အနုပညာရှင်များ၏လက်ပေါ်၊ဒါကြောင့်ထုတ်လုပ်မှုအကျင့်ကိုကျင့်၏အစာရှောင်ခြင်းနှင့်ငါတို့ ၃D စွယ်စုံကျမ်း–ထုံးစံလုပ်အဘို့အအလုပ်တခုကိုကျွန်မတို့–အစဉ်အမြဲသွားကြဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေ။ ကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးပတ်ပတ်လည်ရှုပ်ထွေးဖို့ဒီနေရာနှင့်ကော်ပိုရိတ်အသုံးပြုမှုပြော:ကိုယ့်ကိုသိရ၏တိကျမှန်ကန်မှုကိုကျွန်ုပ်တို့အတုအမွောပြောဖို့အလွန်အနည်းဆုံး။ ဒါဟာအကြီးအကျယ်ကွာခြားချက်နဲ့ကျွန်တော်ကယုံကြည်သူမည်သူမဆိုအပေါ်ကြွလာသောအတွက်သွားခြားနားချက်ကိုမြင်–နေ့ညဉ့်!, မေ့လျော့ခံရသူများ၏တဦးအာက္မွာေသောနိမိတ်လက္ခဏာတက်ဖို့တစ်ဦးပွဲချင်းပြီးနှင့်အတူခွဲတန်းတူဂရပ်ဖစ်:အတွက်ပဲသင်၏မြည်းအတွင်းရှိသစ်ပင်ညမ်းဂိမ်းများနှင့်ကျွန်တော်ပြပါမယ်သင်သည်အဘယ်သို့အမှန်တကယ်သဘောတူညီချက်အားလုံးအကြောင်းပါ။ အပျော်အပါးအစပြုသည့်အခါသင်အကောင့်တစ်ခုဖန်တီးအကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူ!
မှာသစ်ပင်ညမ်းဂိမ်းများ၊ကျွန်တော်တို့သင်ပေးခြင်းထက်ပိုအခြားနေရာများဖြစ်ကြသည်။ မကျနော်တို့အားလုံးကျွန်ုပ်တို့၏ဂိမ်း၊ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့လည်းကမ်းလှမ်းသင်သည်အခမဲ့အပိုဆုမှလက်လှမ်း၏ကြီးမားသောအရေဗီဒီယိုကိုရှာဖွေမည်မဟုတ်ကြောင်းအပေါ်အခြားပလက်ဖောင်း။ ဒီဗီဒီယိုကိုတော်တော်လေးအပြစ်တင်ဖွယ်ချိုမြိန်နှင့်ကိုယ်စားပြုစုစုပေါင်းအလုပ်အထောင်အသောင်းကျော်သို့မဟုတ်ဒါနာရီ။ သူတို့အတွက်ထုတ်လုပ်-လံုးခ်င္းအိမ္(ကဲ့သို့အခြားအရာအားလုံး)နှင့်ဖြစ်စွာသင်တို့နှင့်အတူရိုးသားသော၊သူတို့ထွက်လာများထက်အများကြီးပိုကောင်းကျနော်တို့မျှော်လင့်ခဲ့ကြ။, ဒါဟာတော်တော်ရှည်ရှည်စောင့်ဆိုင်း၊ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ရလဒ်နှင့်အတူပျော်ရွှင်ကြပြီးအမှန်တကယ်ယုံကြည်ကြောင်းမည်သူမဆိုအတွက်စိတ်ဝင်စားဤအမျိုးအစားမီဒီယာအသွားအဘို့ရူး။ ယခု၊ငါတို့သည် ၃၀၀ ဗီဒီယိုထဲမှာ၊နှင့်အတူပတ်ပတ်လည် ၁၀၀ တွက်စီစဉ်ထားတဲ့လွှတ်ပေးရန်တိုင်းတစ်နှစ်တည်း။ ဒါကနှစ်ဦးအသစ်တင်ထားသည်တစ်ပတ်လျှင်! ကျွန်တော်လည်းအလုပ်လုပ်ခဲ့နှင့်အတူအဘယ်သူသည်ယောက်ျားတစ်ယောက်အတွက်အထူးပြုသောငှါအသံ။ နို့တိုက်ကျွေးမှုပြီးနောက်မှာရာပေါင်းများစွာ၏စကားမှျဖင့္စာ၊စီမံထုတ်လုပ်ဖို့တော်တော်လေးမင်းအတွက်တိကျမှန်ကန်စာေၾကာင္းမ်ားနိုင်တာမျိုးသာရှိသည်တင္သူ။ ကြယ်တွေ–ပဲကျွန်တော်တို့ကဲ့သို့သောမြင်ရဖို့အတွက်ခေတ်၏ခေတ် XXX ဂိမ်းကစားအွန်လိုင်း!
ကျွန်တော်တို့တွေဟာစီမံကိန်းမှအကျန်အပေါ်ကျွန်ုပ်တို့၏laurels ဒီမှာပါ:နေစဉ်အကြောင်းအရာအားလုံးကို SPG ပြုတော်မူဒါဝေးစိတ်ကူးဖြစ်ပါသည်၊ကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာမှာအနီးအဆင့်ချင်မှဖြစ်မှာ။ ဒါဟာခက်ခဲတဲ့ဘဲပြိုင်ဆိုင်မှု၊ဒါပေမယ့်ဒီအတင်ပို့မည်အပေါ်စောင့်ရှောက်ရွက်မခွဲခြားဘဲဖြစ်စေမ၏ကျွန်မတို့ဟာပြုပြင်ပေးခံလိုက်။ နောက်တစ်နှစ်၊ကျနော်တို့အနေနဲ့စောင့်ကြည့်နေတာ၊မိတ်ဆက်အနေနဲ့လက္ၿကပတ်ပတ်လည်အခြေတည်သောသစ်ပင်တွေအများကြီးနဲ့ဗီဒီယိုများလိင်ကလစ်နှိပ်လိုက်များအတွက်ဆုလာဘ်အဖြစ်ဖြည့်စွက်အမျိုးမျိုးသောတာဝန်များကို–တော်တော်လေးအပြစ်တင်ဖွယ်အေးမြ! ငါတို့သည်လည်းအလိုတူပြိုင်ပွဲနှင့်အတူတက်ပြန်၊တီရှပ်၊အထူးဒစ်ဂျစ်တယ်အနုပညာလက်ရာများအဖြစ်နှင့်ပိုဆုေ။, ဆက်ပြီးနားထောင်ရန်အတင်းအပိုင်းကိုသင်ကြိုက်လျှင်သင်၏အသံဆိုဒီ:ကျနော်တို့ပေးမယ်အရည်ရွှမ်းအသေးစိတ်ဖြစ်တဲ့အခါသူတို့ရရှိနိုင်င့်။
ပေးသောအရာကိုဖတ်ဖူးသ၊မသီညမ်းဂိမ်းကြောက်မက်ဘွယ်အသံ? နေတယ်ဆိုရင်စိတ်သဘောတူရန်၊လက်ျာဘက်အရာလုပ်ဖို့၊အကောင့်တစ်ခုဖန်တီးပါတီစတင်! သင်တို့ကိုတွေ့မြင်၏အခြားဘက်ခြမ်းတွင်ဤသီ-အာရုံလိင်ဂိမ္းပရဒိသု။